वन, बोर्डिङ र बाँदरझुला – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
वन, बोर्डिङ र बाँदरझुला
२०७० फाल्गुन २६, सोमबार ०२:४४ गते
नेपालको कुल क्षेत्रफलको २३.२३ प्रतिशत भूभाग विभिन्न संरक्षित क्षेत्रहरु र मध्यवर्ती क्षेत्रले ओगटेको छ । मानिसहरुको काठ, दाउरा र चरनको आवश्यकता पूरा गर्न प्रयोग गरिने यस्ता क्षेत्र पछिल्ला दिनहरुमा तीव्र गतिमा फँडानी भैरहेका छन् । बढ्दो जनसंख्याको कारणले पनि वनहरु दिनानुदिन बस्ती र आबादीमा परिणत भैरहेका छन् । अत्यधिक वन फँडानीका कारणले जंगली जनावरले बेलाबेलामा मानिसहरुलाई दुःख पनि दिने गरेका छन् । वन संरक्षणको प्रयासबाट नै मानिस र जंगली जनावरबीचको सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । तर, यसतर्फ न सम्बन्धित निकाय, न सरोकारवाला कसैको पनि ध्यान जान सकिरहेको छैन ।
विसं २०२२ र २०३६ सालमा तत्कालीन सरकारले हालको बाँदरझुला बस्तीमा भूपू सैनिकको बस्ती बसाए पनि त्यो बस्ती सफल रुपमा विस्तार हुन सकेन । तर, त्यसको १० वर्षपछि ०४७ साल कार्तिक ७ गतेदेखि उक्त स्थानमा निरन्तर रुपमा सुकुमबासीहरु बस्दै आइरहेका छन् । मकवानपुर, पर्सा, तनहुँ, लमजुङ, चितवन र धादिङलगायत देशका विभिन्न स्थानबाट विपन्न तथा टाठाबाठा र भूमिहीनहरु बसाइसराई गरी बाँदरझूलामा आई बस्ती बसाएका हुन् । उनीहरु विभिन्न टोलमा विभाजित भएर रहेका छन् । बाँदरझुलामा अहिले ६ वटा क्षेत्र रहेका छन् । विभिन्न जिल्लाका गाउँबस्ती र टोलमा रहेका मानिसहरु विभिन्न समस्या र आवश्यकता बोकेर बाँदरझुलाका विभिन्न फरक–फरक टोल र क्षेत्रमा आई बसोबास गरिरहेका छन् । यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुमा विपन्न, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति तथा पछाडि पारिएका वर्गलगायतका मानिसहरु छन् । बाँदरझुलामा बसेको बस्तीलाई व्यवस्थित र सुनिश्चित गर्न ढिला भैसकेको छ । घरका सदस्यहरु वयस्क भएसँगै वनका जंगल अझ धेरै फँडानी हुने सम्भावना बढेसँगै अब उक्त बस्तीलाई व्यवस्थित बनाई घरधुरी सीमित पार्नु आवश्यक देखिन्छ ।
बस्तीका विपन्न, महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिलगायत सबै वर्गका मानिसहरुको सक्रिय सहभागिता गराई बाँदरझुलाको सीमांकन गरी त्योभन्दा बढी जंगल फँडानी हुनबाट तुरून्त रोक्न सक्नुपर्दछ । जानकारहरुका अनुसार उक्त स्थानबाट बर्षेनि धेरै परिणामको काठ भारत जाने गर्दथ्यो । केही समयदेखि भने त्यो प्रक्रिया रोकिएको छ । स्थानीयहरुका अनुसार उक्त स्थानको नजिकै रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अमुवा पोस्टका सैनिक र केही स्थानीय व्यक्तिहरुको सक्रियताबाट भारततर्फ हुने काठको अवैध तस्कर रोकिएको हो । नेपाली काठको अवैध तस्करमा भारतीयहरुको संलग्नता रहने गरेको भए पनि केही बाँदरझुला बासीको मिलेमतो भने पक्का पनि भएको हुनुपर्दछ । बाँदरझुलाको बस्तीमा बर्षेनि प्राकृतिक प्रकोपले सताउने गर्दछ । चैत–वैशाखमा डढेलो र वर्षामा बाढीको प्रकोपले बाँदरझुलाबासीलाई सताउने गर्दछ । बस्ती धेरै नै विस्तारित भैसकेको छ । अब बस्ती उठाउन पनि सम्भव देखिँदैन, तर सरकारले बस्ती व्यवस्थित गर्ने कुनै योजना ल्याएको पनि छैन । प्रकृतिमा एउटा रुख हुर्कन र बढ्न कयौँ वर्ष लाग्दछ, तर यहाँ सयौँ रुख क्षणभरमा नासिएका छन् । त्यसको लेखाजोखा कहीँ, कतै पनि छैन । अब यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ कि छैन ? त्यस बस्तीभित्रका बासिन्दालाई जंगली जनावर र वन पैदावारको संरक्षण, विकास र सही सदुपयोगका बारेमा प्रभावकारी तालिम तथा प्रशिक्षण दिन आवश्यक छ । स्थानीय बासिन्दाकै सहभागितामा वन पैदावार र वन्यजन्तुको संरक्षण प्रभावकारी बन्न सक्दछ । त्यसैले, बाँदरझुलाबासीको योगदानबाट मात्र उक्त क्षेत्रको वन सजिलैसँग संरक्षण गर्न सकिन्छ । जंगलभित्र रहेको सुकुमबासी बस्तीमा हुन सक्ने सामान्य वन फँडानीलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर घरधुरीको अनुपातमा हेर्ने हो भने काठको माग र त्यसको विनाशमा एकरुपता छैन । त्यसबाट सबैभन्दा बढी घाटा बाँदरझुलाबासीलाई नै पुग्दछ । यो पक्षलाई पनि बाँदरझुलाबासीले ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ । र, सरकारी पक्षको पनि यसमा ध्यान जान जरूरी देखिन्छ ।
बाँदरझुला बस्तीभित्रका प्रत्येक सालका सुकेका रुखको संख्या निर्धारण गरी बर्षेनि काठ संकलनबाट लाखौँ रूपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ, जुन आम्दानीको केही अंशमात्र पनि बाँदरझुला विकासको लागि पर्याप्त हुन सक्छ । यसो गर्दा एकातिर वनजंगल विनाशमा कमी आउँछ भने अर्कोतर्फ बाँदरझुला बस्तीको विकासमा पनि टेवा पुग्दछ । बाँदरझुलाको सुकुमबासी बस्तीलाई सरकारले विभिन्न समयमा उठाउने प्रयास गरे पनि त्यो सफल भने हुन सकेन । उक्त बस्तीलाई उठाउनेतिरभन्दा पनि बस्ती व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नु अबको आवश्यकता बनिसकेको छ । उक्त क्षेत्रबाट नेपाल र भारतलाई बीचमा एउटा सानो डाँडोले मात्र छेकेको छ । भारतीयहरु सजिलैसँग नेपाली भूभागमा आउन–जान सक्ने उक्त क्षेत्रबाट नेपाली सुकुमबासीहरुलाई हटाउनुभन्दा पहिले भारतीय सुकुमबासीहरुले उक्त क्षेत्र अतिक्रमण नगर्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ, जुन कुराको अहिल्यै कुनै सम्भावना नै देखिँदैन ।
बाँदरझुलालाई सुकुमबासी बस्ती भनिरहँदा केही दृश्यहरु भने हुकुमबासी बस्तीका झैँ देखिन्छन् । वनको अधिक विनाश, सोलार बत्ती र बच्चाबच्ची निजी विद्यालयमा पठाउने लहर त बाँदरझुला बस्तीमा अत्यासलाग्दो गरी नै देखियो । प्रत्येक एक घरबराबर १५–२० वटा सुकेका रुखहरु बारीमा ठडिएर रहेको सजिलै देख्न सकिन्छ । बाँदरझुलाबाट एक घन्टाको बाटोमा ठोरीको चौतारा भन्ने ठाउँमा पुग्न सकिन्छ र त्यहाँबाट पनि करिब एक घन्टाको बाटो हिँडेपछि पुग्न सकिने दीपकनगर भन्ने स्थानमा रहेको बोर्डिङ पढ्न जान लागेको विद्यार्थीको त्यो लाइन देखेपछि लाग्न सक्छ, बाँदरझुलामा कुनै विद्यालय नै छैन, तर त्यसो भने अवश्य होइन । बाँदरझुलाका ६ वटा क्षेत्रभित्र तीनवटा सरकारी विद्यालय रहेका छन् । समाजमा रहेका विपन्न वर्गका बच्चाबच्चीले प्रभावकारी शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् भन्ने कुराको महसुस नहुँदोरहेछ, बाँदरझुला बस्तीमा । कसैको वस्तुगत वा आर्थिक सहयोगबाट हो वा आफ्नै कमाइबाट हो, मलाई यकिन भएन तर त्यस बस्तीका बाबुआमाको निजी विद्यालयतर्फको रूचि देख्दा भने पत्याउनै गाह्रो प¥यो । कस्तो अचम्म ! ६ वर्षको बच्चा बोर्डिड पढ्नकै लागि तीन घन्टासम्म पैदल हिँडेर विद्यालय पुग्ने, त्यो पनि कहिलेकाहीँ हो र ? दिनहुँजसो ।
निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नकै लागि सरकारले बर्षेनि अर्बौं रूपैयाँ शिक्षामा लगानी गरिरहेको छ, तर यता हामी भने ऋण गरेरै भए पनि बच्चाबच्चीलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गराइरहेका छौँ । सरकारको कुल बजेटको करिब सत्र प्रतिशत रकम शिक्षामा खर्च हुन्छ, अनि हाम्रो समाजमा सुकुमबासी बस्तीका अभिभावकहरु पनि निजी विद्यालयतिर आकर्षित हुन्छन् । यी दुई पक्षबीच किन तालमेल हुन सकेन ? यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? सरकारी विद्यालयमा हुने पढाइप्रति किन आकर्षण बढ्न सकेन आमसमुदायको ? विपन्न घरपरिवारका बच्चाबच्चीलाई पनि निजी विद्यालयमा नै भर्ना गर्नु उनीहरुको क्षमताले सकेर नै हो कि चाहनाले हो, यसको मूल्यांकन गरी शिक्षा पद्धति र सञ्चालन प्रक्रियामा नै सुधार गर्न जरूरी देखिन्छ । कहिलेकाहीँ सामाजिक हैसियत दह्रो देखाउन पनि यसो गरिएको हुन सक्छ । कमजोर चेतनाको उपज पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । तर जे होस्, सम्बन्धित पक्षले समयमा नै यसतर्पm ध्यान दिन आवश्यक छ ।